Upokisi - isifo esithathelanayo ukuthi kuvamile phakathi izingane zisencane abasebasha. Abantu abaningi naso isikhathi sokusukuma isifo kuya kwezineminyaka eyishumi, ngemva kwalokho kwakhiwa amasosha omzimba impilo, okuyinto ebaluleke kakhulu ngoba isifo ngesikhathi isencane idluliswe kulula kakhulu kunezinye omdala. Yini okumele uyenze uma ingane yakho "baletha" ensimini upokisi? Indlela esiphatha ngayo upokisi ezinganeni? Impendulo yale ukukhathazeka zonke umama.
Upokisi - isifo okuyinto idluliselwa ngokukhethekile amaconsi sisemoyeni. Ngakho, endaweni evamile, igciwane uyafa cishe ngokushesha, ukuze lesi sifo kungaba uxhumane nomuntu ogulayo. Kulokhu, ikhono ukuthelela abanye agcinwe ngu isiguli kuze kube sekupheleni ukubukeka entsha unezilonda esikhunjeni.
Ngaphambi ufunde indlela yokuphatha upokisi ezinganeni, kudingeka bathola lesi sifo. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni lapho varicella zoster igciwane angahlala kumasistimu umzimba akufakazeli ngokwayo, kukuwe amasonto amathathu. Ngokulandelayo, ziqala ukuvela izimpawu eziyinhloko:
Ukuqubuka - uphawu main zazo sitholakale upokisi. Ekuqaleni, kubonakala ngesimo izindawo ezincane, kodwa ke ibhebhetheka ngokushesha wonke umzimba. Ukwakheka Bubbles nge okuqukethwe ketshezi. kuqhuma Peak - Ezinsukwini zokuqala ezimbalwa. Ngalesi sikhathi, Bubbles bangase bafinyelele phezu lwamafinyila ulwelwesi, ikhanda, umthondo. Khona-ke, owokuqala wome, abasha ukuvela. kumiswa zabo ezinganeni kwenzeka amagagasi. Into ejabulisa kakhulu wukuthi ukuqubuka kuhambisana ezinkulu ukulunywa okuqaphelekayo, kodwa ecwaninga ukuqubuka akufanele kube ukugwema izifo.
Indlela esiphatha ngayo upokisi ezinganeni?
Into yokuqala ukuthi uyikhumbule - kubangela upokisi igciwane, ngakho kwamaphilisi ekwelapheni akufanele bathathe ingxenye. Nokho, ngenxa ukunwaya ukuqubuka kungenzeka isifo esibangelwe igciwane, kuleli cala, odokotela kufanele ukuxhuma izidakamizwa ezinamandla. Ngokuvamile uphathwa ambulatory. Umsebenzi abazali ezinsukwini zokuqala zokugula - ukugwema ukunwaya ukuqubuka, kukuphazamise ukuthi ingane ikubheke ukufundwa inganekwane, imidlalo ethule. Lapho Yiqiniso ngempumelelo lesi sifo letengetiwe kuzodingeka, futhi ekugcineni uyogcwala Bubbles futhi soma zinyamalale bebodwa. Kid embozwe amachashazi aluhlaza brilliant, kubonakala ukuthi lesi sakhiwo iphathwa upokisi ezinganeni. Ukwelashwa (isithombe "zaveza 'ingane kungabangela ukudideka phakathi abazali abasha ongenalwazi) kulokhu kuphela kokungathembeki ka izilonda ekhona" izimpawu "yabo upende elikhanyayo oluhlaza. Kubalulekile ukwazi ukuze kutholakale lokho iphuzu ingane iyeke ziyathelelana kwabanye. Ngaphezu kwalokho, oluhlaza brilliant abagcwele kancane bome, disinfects kubo ngisho kancane kusiza ukuqeda ukulunywa. Uma lesi sifo kuhambisana ukunyuka kwezinga lokushisa, edonsa edingekayo antipyretics.
Ngakho sabuka kanjani okuphuma upokisi ezinganeni. Izimpawu, ukwelapha lesi sifo sisaba ibangele izinkinga. Isiphetho main ukudonselwa: inkukhu Pox - sifo, manje noma ngokuhamba kwesikhathi kuzodlula ngokwalo lapho enza imithetho elula inhlanzeko eyisisekelo. Indlela esiphatha ngayo upokisi ezinganeni? Unake izinga lokushisa, unganikeli ecwaninga ukuqubuka, uthi oluhlaza upende Bubbles avele ukunquma ngentuthuko isifo.
Akhtanizovskaya esizalweni somfula - uhambo esiGodini lotuses
Isimiso ukwazi futhi umsebenzi abafundi ngoba ekufundeni okuyimpumelelo
Gynecomastia ezingabantu: ukwelashwa ngaphandle kokuhlinzwa enkambweni steroid